Ny boky fandokoana dia mivarotra betsaka amin'ny Amazon | Famoronana an-tserasera
8 amin'ny 20 amin'ireo boky be mpividy indrindra ao Amazon dia natao handokoana
Ny boky vita pirinty dia manana fotoana tena ratsy noho ny fanosehana nomerika sy ireo mpamaky izay namela ny olona na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta hiditra amin'ny repertoire lehibe iray momba ny kolotsaina sy ny fampahalalana. Izay alaina amin'ny ankilany, dia omena amin'ny lafiny iray.
Ireo boky ireo, toa manana ny fanohanany izy ireo amin'ny inona amin'ireo fanoharana tokony handokoana azy ireo ho an'ny olon-dehibe ho mpividy manery. Ary, ao Amazon, valo amin'ny 20 ny boky be mpividy indrindra dia natao handokoana. Ambonin'ny zava-drehetra, ho an'io karazana mpampiasa mitady ny fandokoana fandriam-pahalemana vetivety io ao amin'ity fiarahamonina misavoritaka sy mikorontana ity izay tsy manome fiatoana amin'ny fihetsem-po na saina.
Ity karazana boky fandokoana manokana ity, aiza mahita antsipiriany bebe kokoa Raha oharina amin'ireo kendrena amin'ny mpihaino tanora kokoa dia manana lohahevitra isan-karazany izy ireo ary lasa iray amin'ireo fanomezana ankasitrahana indrindra amin'ity Krismasy ity.
Izy ireo koa dia mamela ny varotra pirinty hitombo herintaona monja ny tarehimarika 2%. Ny isan-jato izay mety toa tsy dia be loatra, fa mandritra ireo fotoana ireo dia manaitra ny vanim-potoana Amazon izay mandeha nomerika ny zava-drehetra.
Ireo koa dia manaporofo tena tsara amin'ny fomba iray esory ny adin-tsaina isan'andro, hoy i Anne Le Meuer, iray amin'ireo tonian-dahatsoratra mitantana an'ity karazana boky ity. Nolazainy fa nieritreritra ny hanao varotra an'ity karazana boky ity izy ireo noho ny fifandraisana lehibe nananan'izy ireo tamin'ny fizotran'ny famoronana izay ampiasain'ny fitsaboana ara-psikolojika sasany. Hoy i Le Meuer: «Manana ny vokany manala fahasahiranana tokoa izy ireo ary mitondra ilay olona ao anaty fisaintsainana marina.»
Ka raha mbola mitady izay homena an'io olon-tiana io ianao ao anatin'ny taona vitsivitsy dia efa manana hevitra tsara ianao, satria ankoatry ny boky fandokoana dia tokony fonosana pensilihazo amin'ny loko.
Ahoana raha dia efa mpankafy ny Game of Thrones, izany azo antoka fa izany no filamatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » 8 amin'ny 20 amin'ireo boky be mpividy indrindra ao Amazon dia natao handokoana
Torohevitra 6 hampidirina horonantsary ho lasa background ao amin'ny tranonkalanao
Fanononana 8 tena manentana ny fanahy izay aroson'ny Adobe ho an'ireo mpandraharaha hanomboka ny taona